Gudoomiye ku xigeenada golaha shacabka oo kasoo horjeestay mooshinka. — FAAFIYE.COM
Gudoomiye ku xigeenada golaha shacabka oo kasoo horjeestay mooshinka.
By Editor	 On Dec 10, 2018
Gudoomiye ku xigeenka Koowaad iyo labaad ee Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad ayaa shir jiraa’id oo
xalay ay ku qabteen Magaalada Muqdisho waxaa ay uga soo horjeesteen mooshinkii ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Mahad Cabdalla Cawad oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka ayaa ugu horeyn sheegay in marka la eego dastuurka kumeel gaarka ah aanu sharci ahayn mooshinkan maadaama buu yiri aanay dhisnayn maxkamadii dastuuriga
Waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka ay horey ugu digeen in uu qabto mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo taas badalkeedana uu ka dhaga adaygay isagoona intaa raaciyay hadalkiisa in gudoomiyaha uu yeelanayo wixii cawaaqib ah ee ka dhasha mooshinka.
Dhinaca kale Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo isna ka hadlay shirka jiraa’id waxa uu sheegay in Gudoomiye Mursal uu qabtay mooshinka xilli uu xanaaqsanaa, islamarkaana dalka aan lagu maamulim karin xanaaq waa sida uu hadalka u dhigaye.
Si kastaba xaalada siyaasadeed ee magaalada Muqdisho ayaa kacsan iyadoona kulamo goono gooni ah ay uga socdaan xarunta Villa Hargaysa gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaano oo dhinac ah iyo labadiisa ku xigeen kuwaas oo kasoo horjeeda mooshinkan uu aqbalay Mursal.
Mareykanka oo sheegay in duqeyn uu ku dilay rag ka tirsan Alshabaab
Alshabaab oo shaacisay magacyada & beelaha ay kasoo jeedaan raggii weeraray Xerada C/weli Cilmi Yare.